Ny fomba famitahana ataon'ny mpampihorohoro - Mpanararaotra
Miahiahy ianao fa mamitaka anao ny namanao mpihinana zava-mahadomelina.
Na mety manana porofo ianao fa namitaka anao ny taloha narcissistic anao.
Ary manontany tena ianao hoe maninona.
Tonga ao an-tsain'izy ireo izany rehetra izany. Ny fizotry ny eritreritra mifehy ny fihetsik'izy ireo.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny antony mety hisoloky ny mpifoka rongony sy ny fomba fihetsika mety hitranga rehefa hita ny tsy fivadihana.
Nefa aloha, mety manontany tena ianao…
Mamitaka daholo ve ny mpifoka rongony?
Valiny fohy: tsia, tsy ny mpifoka rongony avokoa no mpamitaka.
Saingy ny Narcissist Personality Disorder (NPD) dia mahatonga ny olona iray hihoatra lavitra noho ny olon-tsotra tsy mahatoky ny sakaizany.
Toy izany koa, tsy afaka milaza ianao fa mpamitaka daholo ny mpamitaka.
Ny olona avy amin'ny fiaviana sy fiaviana isan-karazany dia afaka mifraody.
Saingy ny antony mahatonga ny mpifoka rongony hisoloky ary ny fomba fahatsapany an'io dia mampisaraka azy ireo amin'ny hafa.
Fa maninona no mifraody ny mpifoka rongony?
Ny fironana mpampihomehy hamitaka ny sakaiza dia avy amin'ny fitambaran-javatra.
Ity manaraka ity dia lisitr'ireo zavatra manampy.
1. Famatsiana narcissistic
Narcissists maniry ny hisarika ny saina sy hiankohoka. Ity no zava-mahadomelina safidiny.
Rehefa mijery azy ireo ny olona, ​​manenjika azy ireo, na maniry azy ireo amin'ny fomba rehetra, dia mahatonga azy ireo hahatsapa ho tsara amin'ny tenany izany.
Ny olana dia, mila fiheverana betsaka sy karazana fiheverana mety izy ireo.
Ary ny fifandraisana tokana dia tsy manome azy ireo izay ilainy, indrindra raha efa tafaorina tsara izany fifandraisana izany ary tsy mahaliana intsony toy ny taloha.
Ary noho izany dia mitady any an-kafa izy ireo raha misy mpankafy vaovao hanome ny avo indrindra.
2. fahatsapana ny lohateny
Ny narcissist dia mino marina fa mendrika zavatra kokoa izy ireo noho ny olon-kafa.
Matetika manana ny fahamboniana ambony izy ireo ary izany no mahatonga azy ireo mahatsiaro manana ny rariny handray izay tadiaviny amin'ny fiainana.
Ary ao anatin'izany ny fananana namana mihoatra ny iray na raharaha.
Tsy fanontaniana ny hoe mety sy tsy mety ve izany ara-pitondran-tena izany satria tsy mila miaina mifanaraka amin'ny fenitra amintsika olombelona ambany.
Misy fitsipika samihafa ho azy ireo ary ireo lalàna ireo dia manamarina ny tsy fivadihana ara-pihetseham-po sy ara-batana.
3. Eko iray mitombo
Araka ny efa voalazantsika teo dia mieritreritra ny tenany be ny narcissists.
Mihevitra izy ireo fa tena tian'ny olona izy ireo.
Izany dia manome azy ireo fahatokisan-tena eo amin'ny manodidina ny mpikambana amin'ny firaisana tiany ary afaka mamadika izany ho manintona izy ireo.
Ity hatsarana ity dia miteraka fiheverana tsara izay manome ny famatsiana narcissistic voalaza etsy ambony.
Ary noho izany dia tsy saro-kenatra izy ireo mametraka ny tenany amin'ny toe-javatra izay hiafarany milalao olon-kafa ankoatry ny mpiara-miasa aminy.
Indraindray dia mijanona ho toy ny filalaovana fitia fotsiny izy io, saingy amin'ny alàlan'ireo toe-javatra ireo dia manana fotoana bebe kokoa hamitahana izy ireo.
4. Fanaraha-maso tsy mahomby
Misy porofo manolotra fifandraisana matanjaka eo amin'ny tsy fitoviana sy ny tsy faniriana.
Tsy ny fotoana rehetra dia eritrereto, satria ny mahay mifidy zava-mahadomelina dia mety ho be koa ny manisa.
Saingy amin'ny toe-javatra misy ny fotoana ahazoana antoka ny famatsiana narcissistic sy ny fahafinaretana ara-batana na ara-nofo hafa, dia mety ho hitan'ny narcissist iray fa tsy azo toherina ilay faniriana.
Raha tsy misy fiheverana ny vokatr'izay nataony dia mety hanambaka ny sakaizany matetika izy ireo amin'ny tsy antony hafa noho ny tsy fifehezan-tena.
5. Fihetseham-batana ambony
Mpihinana marobe no manana libido mahery.
Ho azy ireo, ny firaisana ara-nofo dia loharanom-pahalalana hafa ary vintana hanaporofoana ny lanjan'izy ireo.
Na inona na inona fankafizan'izy ireo na ny olon-tiany, dia mampiasa firaisana ny vehivavy iray mpitaiza vehivavy mba hampitonena tena.
Voa mafy amin'ny zava-mahadomelina ilain'izy ireo ny mahatsapa tena momba azy ireo.
Raha tsy afa-po amin'ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny sakaizany intsony izy ireo dia tsy ho mafy tokoa izany.
Ka hitady firaisana ara-nofo any an-kafa izy ireo mba hahazoana izay ilainy.
6. Fitsangatsanganana herinaratra
Tian'ireo mpandinika zava-mahadomelina fa mahatsapa fa mifehy ny hafa izy ireo. Miala amin'ny herin'ny fandresen-dahatra ny olona hanao zavatra araka izay tiany izy ireo.
Ny firaisana ara-nofo na endrika fanarahan-dalàna ara-batana na ara-pihetseham-po hafa dia mahafinaritra ny mpitsabo.
Ary noho izany dia hitan'izy ireo fa fanamby hisarika olona sy hisarika ny olona io. Tsy maninona amin'izy ireo fa efa misy fifandraisana izy ireo.
Ankafizin'izy ireo ny fifanenjehana sy ny fahafaham-po amin'ny fahazoana tsara prospect ao am-pandriana.
Manaraka izany dia hahazo fahafinaretana bebe kokoa izy ireo amin'ny fifehezana ny mpiara-miasa mihoatra ny iray. Ary noho izany dia mety hanao raharaham-barotra izy ireo na hitarika fiainana maro miaraka amin'ny mpiara-miasa marobe.
Raha afaka miala amin'izany izy ireo dia manaporofo izany fa tena ambony noho ny hafa izy ireo. Malina kokoa, manintona kokoa, tiana kokoa.
7. Fanimbana olona
Araka ny resahina ao ity lahatsoratra lalina momba ity , tsy mahita na mandray ny olona ho olombelona ny mpifoka rongony.
Hafa noho ny loharanom-pahalalana, ny olona dia hita fa zavatra hampiasaina sy hanararaotana fotsiny.
Tsy maninona ny fahatsapan'izy ireo. Tsy mampaninona azy ireo ny fiadanany.
Ny mpitsabo tena dia tsy miahy afa-tsy ny tenany.
Ny famitahana amin'ny mpiara-miasa dia tsy tena mamitaka eo imason'ny mpifoka rongony. Ahoana no ahafahan'ny olona iray manambaka zavatra iray amin'ny zavatra hafa?
8. Tsy fahampian'ny heloky ny olona
Ny vokatra tsy azo ihodivirana tamin'ny teboka teo aloha dia ny tsy fahitan'ny narcissist ny fahatsapana ho meloka na nenina noho ny famitahana ny mpiara-miasa.
Tsy maninona na olona iray vao nifaneraserany na vady na vady efa an-taonany na am-polony maro izy ity.
Izy ireo dia tsy hosakanana tsy hivadika amin'ny fihetseham-po amin'ny mpiara-miasa aminy. Tsy manana feon'ny fieritreretana hisakana azy ireo izy ireo.
Ary io dia miverina amin'ny tsy fahampian'ny fifehezana tsindrimandry noresahina tetsy aloha.
Ny zavatra iray manampy ny ankamaroan'ny olona hifehy ny hetahetany dia ny tsy fankasitrahana mafy ireo fahatsapana ratsy ateraky ny fanapahana ny fitokisan'ny olona iray tianao.
Saingy satria tsy mahatsapa zavatra toy izany ny mpifoka rongony dia tsy eo io fomba fisorohana ny tsy fivadihana io.
9. Mihevitra izy ireo fa afaka manalavitra izany
Mpahay mandainga sy mpanodikodina mahay ny narcissists. Mety hamitaka fotsiny izy ireo satria mino fa afaka miala amin'izany.
Tsy mino izy ireo fa hisy vokany lehibe amin'ny fihetsik'izy ireo satria afaka miteny ny lalan-kivoahana amin'izy ireo izy ireo.
Tsy milaza izany fa ho ampy ny vokany hisorohana azy ireo amin'ny fanaovana hosoka.
Saingy tsy hitan'izy ireo tsotra akory ny valiny handresy lahatra azy ireo tsy hamitaka.
Lahatsoratra manan-danja hafa momba ny narcissist:
Zavatra 5 no lazain'ny mpihary sy ataon'izy ireo mba hiverenanao any aoriana
Mekanisma miatrika rehefa mamela ny mpiara-miombon'antoka Narcissistic ao aoriany
Ny fambara mpamitaka mpamitaka
Ny fahatsapana fa ny sakaiza iray mpamitaka dia mamitaka anao matetika dia tonga mahita ny famantarana.
Tsy dia samy hafa be amin'ireo izay hitanao amin'ny olona mifraody, tsy mahay na tsia, ireo.
Na dia misy aza ny zavatra manasongadina izay mifandraika kokoa amin'ny mpifoka rongony.
afaka miova ho an'ny vehivavy tiany ve ny lehilahy?
1. Nanjavona nandritra ny fotoana maharitra izy ireo
Mety tsy hahita azy ireo ianao na handre azy ireo mandritra ny andro maromaro na impiry na impiry ianao no manandrana mifandray.
Afaka hanjavona tsy ho eny ambonin'ny planeta izy ireo rehefa mandany fotoana amin'ireo mpiara-miasa na olon-tiana hafa.
Na dia miara-mipetraka amin'izy ireo aza ianao dia mety hahita fomba hialana amin'ny 'asa' na fialam-boly na mahita namana taloha (olona izay mety mbola tsy noresahin'izy ireo akory akory taloha).
Rehefa manohitra azy ireo ianao dia mamorona lainga be dia be ary milaza aminao fa manamboatra tendrombohitra avy amin'ny molehill ianao.
Na mety hanomboka ady aminao mihitsy aza izy ireo mba hamoronana ny filàna vanim-potoana ‘milamina’. Izany dia manome azy ireo fialan-tsiny tonga lafatra tsy eo tanteraka mandritra ny fotoana fohy.
2. Mety hiampanga anao ho mamitaka izy ireo
Mba hamoahana anao ny fofon'ny tsy fivadihan'izy ireo manokana dia mety hiantso anao izy ireo ary hilaza fa mamitaka azy ireo ianao.
Inona ary, nahoana ianao no miahiahy azy ireo fa tsy mahatoky izy ireo raha manambany tena amin'ny fitondran-tena toy izany izy ireo?
Amin'ny alàlan'ny fanafihana voalohany, napetrak'izy ireo tamin'ny tongony aoriana koa ianao. Na dia mieritreritra aza ianao fa mamitaka anao izy ireo, dia sarotra ny mitondra ilay resaka nefa manandrana miaro tena ihany koa ianao.
Raha manao izany ianao dia tsy hanadino ny fiampangana azy ireo ho toy ny fomba fialanao tsiny.
Tsy tokony hafangaro amin'ny kilasika izany vinavina ara-tsaina izany hoe rehefa manavaka ny fihetseham-po ratsy amin'ny olon-kafa ny olona.
Raha misy mpihinana zava-mahadomelina dia tsy mahatsapa fihetseham-po ratsy izy ireo rehefa manambaka ary noho izany ny antony niampangany anao ho namitaka dia tsy fanandramana hahatonga azy ireo hahatsiaro tena ho tsara kokoa.
3. Fialana andraikitra amin'ny fiarahana amin'ny haino aman-jery sosialy
Matetika ve izy ireo mamela ny fanehoan-kevitra amin'ireo lahatsoratra sy sarin'ireo lazaina fa sakaiza izay somary manadala na manome soso-kevitra?
Hilaza izy ireo fa tsy manan-tsiny tanteraka io, mazava ho azy, saingy mety hiteny ianao fa tsy misy setroka raha tsy misy afo.
Ny fanehoan-kevitra toy izany dia tsy ampy hanaporofoana fa misoloky. Fa raha vonona ny ho brazil be momba ny filalaovany izy ireo dia mampiseho fa tsy miraharaha izay lazainao na eritreretinao izy ireo.
4. Miova ny fahazaran-dratsy
Araka ny efa noresahina tetsy ambony, ny firaisana dia fitaovana iray hanatanterahana ny zava-mahadomelina. Fomba iray ahazoan'izy ireo ny fanamboarana ny famatsiana narcissistic azy ireo.
Ary raha hitanao fa tsy mangataka firaisana aminao intsony ny vadinao, dia misy vintana lehibe mety ahazoan'izy ireo izany any an-kafa.
Na raha mipoaka ny firaisana, dia mety hidika izany fa nanary ny olon-tiany farany izy ireo na tsy misy ilay olona noho ny antony sasany. Ary dia miverina aminao izy ireo hanome fahafaham-po ny filan'izy ireo.
5. Tsy avelany hanakaiky ny findainy izy ireo (na misokatra be loatra aminy)
Raha mpamitaka anao no misoloky anao dia mety mandamina ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny hafatra izy ireo.
Mety ho an'ny olona efa fantany izany, na mety amin'ny alàlan'ny fampiharana mampiaraka na hookup isan-karazany.
Noho izany, mazava ho azy fa tsy hamela anao hanakaiky ny telefaoniny izy ireo ary hitazona anao ny tenimiafinao.
Amin'ny lafiny iray hafa, mety hisokatra amin'ny alàlan'ny findainy izy ireo ary mamela anao hampiasa azy io isaky ny tianao.
Raha izany no izy dia misy ny fahafaha-mahazo telefaona miafina faharoa ampiasan'izy ireo rehefa tsy eo akaikinao ianao.
Na angamba milaza izy ireo fa manana telefaona miasa izay tsy avela hidiranao, izy ireo ihany no toa tsy dia be loatra amin'ny ora fiasana.
6. Tonga dia mitsitsy vola tampoka izy ireo
Tian'ireo narcissist ny manaparitaka ny vola amin'ny tombotsoan'ny fitiavana vaovao. Izany dia mitranga mandritra ny dingana voalohan'ny fifandraisana rehefa baomba tia ireo niharam-boina farany teo amin'ny fikasana handresy azy ireo.
Ny vokatr'izany dia tsy dia manam-bola handaniany na hiaraka aminao izy ireo.
Raha tsy manambady ianao (ary na dia indraindray aza), dia hanizingizina ny kaonty misaraka amin'ny banky ny mpitsabo, ka tsy ho fantatrao izay andaniany vola.
Fa raha mangataka aminao izy ireo hanasa ny volavolan-dalàna amin'ity volana ity na tsy hamoaka anao loatra, dia mety noho izy ireo mamily vola amin'ny olon-kafa.
Fifanatrehana mpanafika mpamitaka
Andao hieritreritra fa matoky tena tsara ianao fa mamitaka anao ny namanao narcissistic.
Inona no mitranga rehefa tojo azy ireo momba izany ianao?
Matetika, ny fanehoan-kevitr'izy ireo voalohany dia fandavana. Tsy hanaiky na inona na inona izy ireo.
Raha misoloky izy ireo, dia handiso lainga fotsiny handreseny lahatra anao raha tsy izany.
Tezitra izy ireo ary jiro ianao mba hanary anao hanitra.
Handa ny handray anjara amin'ilay olana izy ireo ary hanakatona ny resaka isaky ny manangana azy ianao.
Ahoana anefa raha manana porofo manamarina ianao na mampiseho fa meloka izy ireo?
Avy eo izy ireo dia hiezaka hanala baraka ny fampahalalana rehetra anananao. Hilaza izy ireo fa tsy azo itokisana ny loharano, na dia ianao aza izany loharano izany.
Diso ny henonao. Tsy hitanao izay hitanao hitanao. Izay novakianao dia tsy izy ireo no nanoratra.
Raha olona hafa mino fa nahita na nandre zavatra izy, dia mandainga aminao io olona io. Ny mpitsabo tena dia hiteny fa tsy tia azy ireo mihitsy ny olona ary manandrana misaraka aminao.
Ary inona no hitranga raha maharitra amin'ny filazanao fa namitaka izy ireo? Ahoana raha tsy azo lavina ny porofoo?
Hampody anao ny zava-mahadomelina ary hilaza fa ny fihetsikao no nahatonga azy ireo hamitaka.
Tsy nosy loatra ianao. Tsy naneho fatokisana azy ireo ianao. Ratsy ny nitondranao azy ireo. Namela ny tenanao handeha ianao.
Raha tsy afaka mamily lainga amin'ny zavatra amin'ny lainga izy ireo dia hataony ny zavatra tsara manaraka ary hataony diso aminao izany.
Mamerina anao amin'ny fiarovan-tena izany ary manaisotra ny fifantohana amin'ny fihetsik'izy ireo.
Ka tokony hanelingelina azy ireo akory ve ianao?
Eny ary tsia.
Ny fifanatrehana amin'izy ireo dia azo antoka fa tsy hahatsapa ho tsara ary azonao atao ny manantena azy ireo hampiasa ny tetika maloto rehetra hamelezana anao.
Raha toa ianao ka mila miaiky heloka, amin'ny antony fisaraham-panambadiana ohatra dia azonao atao izany.
Na dia te hiala amin'ny fiarahana fotsiny aza ianao dia afaka manomboka izany dingana izany.
Tsy mora ny miala amin'ny mpitsabo mpanelanelana - tsy hanaovany mora izany - fa raha mieritreritra izy ireo fa tsy mino intsony ny laingany ary tsy afaka manodikodina anao dia mety hanapa-kevitra izy ireo fa tsy mendrika ny ezaka intsony ianao.
Ny safidy hafa dia ny fiakarana sy ny fialana ary tsy hifandraisana amin'izy ireo. Amin'ny fotoana maharitra, ity dia fomba mahomby amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpifoka rongony , saingy mametraka ny olany manokana ao anatin'ny fotoana fohy.
Na inona na inona fomba fiasa alehanao, dia mety hanao fampielezan-kevitra manapotika anao ilay narcissist mampiasa gidro manidina hanaparitahana vaovao izay no mahatonga anao ho olona ratsy.
Tsy tian'izy ireo ny hafa hino fa tsy lavorary noho ny fiheverany azy izy ireo.
Saingy amin'ny farany, mifraody na tsy misy fitaka, tsara kokoa aminao ny miala amin'izany fifandraisana izany.
olona izay manome tsiny ny hafa
inona no hatao rehefa bandy roa tia anao
ahoana no ahafantarako raha manintona aho na tsia